सजिलो छैन् बालेनलाई, पहिलो बैठकमै मेयर उपमेयरको पसिना नै छुट्नेगरी आपत्ती जनाउने यी वडाअध्यक्षको खास माग यस्तो रहेछ ! (भिडियोसहित) – Annapurna Post News
May 30, 2022 sujaLeaveaComment on सजिलो छैन् बालेनलाई, पहिलो बैठकमै मेयर उपमेयरको पसिना नै छुट्नेगरी आपत्ती जनाउने यी वडाअध्यक्षको खास माग यस्तो रहेछ ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकमा तनाव भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको इतिहासमै स्वतन्त्तबाट मेयर बनेका बालेनले ऐतिहासिक निर्णय गरेपछि कार्यापालिकाको बैठक लाईभ गरिएको थियो ।
सो बैठकमा तनावको स्थिती सिर्जना भएको थियो । लाईभ बैठकमा मेयर उपमेयर नै एकछिन त रनभुल्ल भएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
फोहोरमैलाको समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय लिने क्रममा केही वडाध्यक्षले विवाद झिकेका हुन् । महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले आफ्नो नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई जना र समाजवादीबाट १ जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही बमोजिम बैठकको निर्णय भन्दै प्रशासकीय प्रमुखले केही बुँदा पढेर सुनाए ।
फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा गठिन कार्यदलको बैठक भोलि नै बिहान बस्ने भनियो । त्यसका लागि एमाले र कांग्रेसबाट दुई–दुईजनाको नाम दिन आग्रह गरियो । लगत्तै १६ नम्बरका वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालले आपत्ति जनाए ।
‘यो पार्टीको एक जना त्यो पार्टीको एक जना भाग लगाउने को हो तपाईं ?’ रिजालले चुनौति दिए, ‘यो तुरुन्तै फिर्ता लिनुस् ।’ त्यसपछि मेयर बालेन्द्रको अनुमति लिएर महानगरका प्रशासकीय प्रमुखले उक्त निर्णय फिर्ता लिइएको बताए । त्यसपछि केही वडाध्यक्षले बैठकमा निर्णय गर्ने प्रक्रियाबारे सिकेर आउन आग्रह गरे । एक वडाध्यक्षले भने, ‘बैठकको प्रक्रिया सिक्नुस । कसरी प्रस्ताव गरिन्छ, कसरी निर्णय गरिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नुस् । तपाईंले पार्टीको नाम लिइरहनु आवश्यक थिएन ।’
वडाध्यक्षहरु आक्रामक बन्दा मेयर बालेन्द्र भने संयमितरुपमा प्रस्तुत भए । उपमेयर सुनिता डंगोल पनि शान्त भएर बसिरहिन् । पछि मेयर र उपमेयरबीच केही साउति भएको देखियो । सम्भवत सुनिताले बालेन्द्रलाई केही बोल्न सल्लाह दिइन् ।
बैठकको अन्तिममा बोल्दै मेयर बालेन्द्रले आफू कसैलाई पनि पार्टीगत आधारमा हेर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्टीकरण दिए । उनले यो प्रस्ताव मात्रै भएको र निर्णय भइनसकेको बताएर विवाद थामथुम गरे ।